Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere oo markii u horeysay ka hadlay howl galkii fashilmay ee Buulo Marer – idalenews.com
Afhayeenka guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere oo shalay shir jaraa’id ku qabtay deegaanka Buulo Mareer ayaa markii u horeysay ka hadlay howlgalkii fashilmay ee Ciidamada Kumandoska Faransiiska ka fuliyeen deegaankaas habeenkii jimcaha.
Cali Dheere ayaa ugu horeyn sheegay in Ciidamada Faransiiska oo diyaarado ku soo degay ay dagaal adag la galeen mujaahidiinta.
“Sida aan horay u sheegnay Gaalo waa isa soo baheysatay, diyaarado ayay ku soo dageen, laakiin Mujaahidiinta ayaa jilbaha u laabtay oo dagaal culus la galay, markii hore waxay ku gamban jireen dabaabaadka iyo diyaaradaha”ayuu yiri Cali Dheere.
Cali Dheere ayaa ku amaanay Xoogagii la dagaalamay Faransiiska, isla markaana isugu darsantay sida ay kala yihiin Burcad badeeda iyo Al-Shabaab.
“Waxaad soo celiseen sharaftii dadka Muslimiinta, markii aad Faransiiska la dagaalanteen, waxay kala garan waayeen burcad badeeda iyo Al-Shabaab, dhowr jeer ayay burcada badeeda ku soo duuleen”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Mar uu soo hadal qaaday fara gelinta milateri ee Faransiiska ka wado dalka Mali ayuu sheegay inay la mid tahay mida lagu barakiciyay shacabka Ciraaq iyo Afganistaan ee lagu duulay.
Cali Dheere ayaa fariin u diray dagaalyahanada Mali, isagoo ugu baaqay inay u sabraan diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ku haya, ayna sugaan inta ay Ciidamada Faransiiska dhulka kula dagaalamayaan oo uu xusay inay soo dhow dahay.
Dhinaca kale waxaa uu ugu baaqay Faransiiska inay ka hor leexdaan islaamka, ama ay ku hoos noolaadaan Shareecada Islaamka, hadii ay rabaan inay bad-baadaan.
Shalay ayay aheyd markii Al-Shabaab ay soo bandhigeen Askari ka mid ahaa Ciidamadii Kumandoska ee ku duulay deegaanka Buulo Mareer, kaasoo u dhintay dhaawacii soo gaaray.